मास्क लगाएपछि चस्मामा आउने बाफ कसरी रोक्ने? | Esajhakura
May 16, 2022, 8:27 pm
गृह पृष्‍ठ खबर मास्क लगाएपछि चस्मामा आउने बाफ कसरी रोक्ने?
मास्क लगाएपछि चस्मामा आउने बाफ कसरी रोक्ने?
प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण २८ , बुधबार १६:५१
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आजभाेलि मानिसहरुले मास्क लगाउन थालेका छन्। तर चस्मा लगाउने मानिसहरुलाई भने मास्कका कारण समस्या हुन्छ।
मास्क लगाउँदा आफ्नै श्वासको बाफले चस्मा छोपिने समस्या अधिकांशले ब्यहोरिरहेका हुन्छन्। साथै धेरैबेर मास्क लगाउँदा यसले हाम्रो कानमा पनि पीडा दिने गर्छ।
याे समस्याबाट बच्न केही टिप्सः
– मास्क लगाउँदा चस्मामाथि पर्नेगरी लगाउँदा समस्या आउन सक्छ त्यसैले चस्माले मास्कलाई थिचेर लगाउने।
– टिस्यु पेपरले पनि यो समस्याबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। मास्क लगाइसकेपछि मास्कको माथिल्लो भागमा भित्रपट्टि केही टिस्यु पेपरलाई टाँसेर हालेमा त्यसले नाक तथा मुखबाट निस्केको बाफ सोस्न मदत गर्छ र चस्मामा बाफ पुग्दैन।
– चस्मालाई साबुनपानीले राम्ररी धुनुपर्छ। त्यसो गर्दा बन्ने पातलो झिल्लीले चस्मामा बाफ बस्दैन।
पछील्लो पोस्ट विधान जति मिच्न सक्यो त्यति बलवान सभापति ठहर्छु भन्ने देउवाको मानसिकता छ -पौडेल
अगिल्लो पोस्ट कांग्रेस क्रियाशिल सदस्य भट्टराईको गयराती निधन, लक्ष्मणघाटमा अन्त्यष्टि गरियो
कपिलवस्तुका दुई पालिकामा छुट्टाछुट्टै मतपत्र प्रयोग हुने
कपिलवस्तुु जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञा हुन् सक्ने प्रवल...